Ọ na -achọ California Surge ka US na -emepe njem mba ofesi
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » Ọ na -achọ California Surge ka US na -emepe njem mba ofesi
Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Iwughachi • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
California ama ama
Ọpụpụ mbu 1 nke California bụ njem mba ofesi, ọ dịkwa njikere ịlaghachi azụ mgbe US kwupụtara usoro iheomume iji mepee ndị ọbịa ọgwụ mgbochi. Nkwuputa a agbanyụla nyocha njem na ntinye akwụkwọ, na -ese onyinyo ụbọchị dị mma maka njem na njem nlegharị anya nke steeti ahụ.
Houselọ White House kwupụtara na Septemba 20 na ndị ọbịa mba ofesi nwere ike ịbanye na US ozugbo Nọvemba.
Ndị njem bidoro ozugbo na -achọ ide akwụkwọ njem ga -ejupụta n'ụgbọ elu Europe na saịtị ntinye akwụkwọ njem.
British Airways kọrọ mmụba 700% na nyocha maka njem na Los Angeles, Skyscanner hụrụ mmụba 54% na nleta sitere n'aka ndị na -azụ ahịa na -achọ ileta United States.
Solutions Group Media Solutions kọrọ na mmụba nwere mmasị na njem San Francisco, karịa ịgbasa okporo ụzọ ọchụchọ n'ime otu ụbọchị ọkwa ọkwa mmeghe.
“California dị njikere ịnabata ndị enyi anyị sitere gburugburu ụwa, obodo anyị dịkwa na -atụgharị kapeeti uhie maka ọtụtụ ndị ọhụrụ naanị-Ahụmahụ California ịchọpụta, ”Gaa na Onye isi ala California na onye isi Caroline Beteta kwuru. "Enwere nnukwu agụụ maka ụdị ndụ California, anyị na-atụkwa anya ịhụ azụmaahịa a na-ebigbọ."
Ndị njem mba ofesi so na ndị ọbịa California na-enweta ezigbo ego: Ha na-anọ ogologo oge wee na-emefu ego karịa, ha na-eme njem n'etiti izu ụka na oge oke. N’afọ 2019, ndị ọbịa mba ofesi mefuru $ 28 ijeri na California, na -enye ndị ọrụ California ọrụ ndụ na ụtụ isi dị mkpa nye obodo n’ofe steeti ahụ.
California bụ Mba nke 1 na United States, ndị njem mba ofesi dị oke mkpa na steeti ahụ, ọkachasị na nnukwu obodo ọnụ ụzọ ámá:
Na Los Angeles, ndị ọbịa mba ofesi ruru pasent 56 nke mmefu njem niile tupu oria ojoo a.
Onye isi ala na onye isi oche njem nlegharị anya Los Angeles Adam Burke kwuru, "ọkwa na ndị ọbịa mba ofesi ga -enwe ike ịga leta United States na Nọvemba. “Ndị ọbịa mba ofesi na -anọchite anya otu akụkụ ahịa LA kachasị mkpa - na 2019 naanị, anyị nabatara nde mmadụ nde 7.4 sitere gburugburu ụwa. Ọ bụghị naanị na ndị ọbịa mba ofesi nwere nnukwu mmetụta akụ na ụba, ha na -enyekwa aka na ọdịbendị anyị mara mma na iche iche, anyị enweghịkwa ike inwe obi ụtọ ịnabata ndị njem a ịlaghachi n'obodo ndị mmụọ ozi anyị. ”
N’afọ 2019, ndị ọbịa mba ụwa ruru 12% nke mmefu njem niile na Anaheim na 33% nke mmefu njem niile na Orange County.
Junior Tauvaa, onye isi ndị na -ahụ maka ịre ahịa, gaa Anaheim kwuru, "Ebe Orange County nabatara nde ndị ọbịa nde 4.6 na 2019, ọ na -egosipụta ike akụ na ụba nke njem mba ofesi yana ọrụ ọ ga -arụ na mgbake akụnaụba Anaheim." "Ụlọ ogige ntụrụndụ isiokwu na ịzụ ahịa ụwa, Anaheim na Orange County ga-aga n'ihu bụrụ nnukwu ihe nkiri maka ndị ọbịa mba ofesi."
IHE NGWỌ NKE PALM
Na Greater Palm Springs, ndị ọbịa mba ụwa ruru ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 10% nke mmefu njem niile tupu oria ojoo a, ma ọ bụ ihe karịrị ọkara ijeri dollar na 2019.
Onye isi ala & onye isi oche Scott White kwuru, "Anyị dị njikere ma nwee obi ụtọ ịnabata ndị ọbịa mba ofesi n'enweghị nsogbu ọ bụla." "Site na nloghachi nke mmemme mbinye aka anyị - site n'izu ọgbara ọhụrụ, egwu na mmemme ihe nkiri gaa n'egwuregwu dị ka BNP Paribas Open, na ọtụtụ ụlọ nkwari akụ na ebe ntụrụndụ ọhụrụ a rụzigharị n'oge na -adịbeghị anya, ọ dịbeghị oge ka mma ịga Greater Palm Springs."
Na San Diego, ndị ọbịa mba ụwa ruru 24% nke mmefu njem niile tupu oria ojoo a.
"Anyị maara etu njem mba ofesi dịruru mkpa ahụike ahụike akụ na ụba San Diego, anyị makwaara na ndị njem mba ofesi na -achọsi ike ịlaghachi na San Diego," Onye isi oche na onye nlekọta njem nlegharị anya San Diego & CEO Julie Coker kwuru. N'ezie, British Airways kwupụtara n'oge na-adịbeghị anya na ọ ga-amalite ọrụ ya na-akwụsịghị akwụsị otu afọ n'etiti ọdụ ụgbọ elu Heathrow na London na ọdụ ụgbọ elu mba San Diego n'ihi ọchịchọ siri ike. Ọ bụ ezie na anyị ka nwere ụzọ dị ogologo ịlaghachi iji laghachi na ọnụọgụ ọnụọgụ ọrịa oria ojoo anyị, ọnụ ọgụgụ ndị njem ụgbọ elu mba ofesi na-arị elu wee rịa elu karịa 140% n'ọnwa Ọgọst site n'afọ gara aga. ”
Na San Francisco, ndị ọbịa mba ụwa ruru 62% nke mmefu njem niile tupu oria ojoo a.
Joe D'Alessandro, onye isi oche na onye isi oche Njem Njem San Francisco kwuru, "Ọmụrụ nwa nke ndị mmekọ njem anyị na UK, Germany, France na India kwuru na -eso ọkwa ọkwa White House bụ nnabata. . "Ndị mmadụ na -enwe obi ụtọ ileta ma hụ ọmarịcha nri, ọdịnala na ihe omume obodo anyị mara mma, anyị enweghị ike ichere ịnabataghachi ha."
Ahụmịhe akara ngosi nke San Francisco na nnabata nnabata dị iche iche na -echere ndị ọbịa, yana ebe nkiri ọhụrụ, ụlọ oriri na ọ restaurantsụ restaurantsụ na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ meụ ndị mepere n'ime ọnwa iri na asatọ gara aga. Agbanweela ọnọdụ iri nri nke obodo site na ịrị elu nke nhọrọ alfresco ugbu a na "ogige" abụrụla ihe na -adịgide adịgide.
Usoro ihe omume na ihe ngosi juru n'ọnụ gụnyere “Illuminate SF,” ememme ọkụ nka ọnwa na-adị kwa ọnwa; "Ezigbo San Francisco," onye ode egwu acrobatic ọhụrụ na San Francisco na Club Fugazi, ebe bụbu ebe akụkọ ifo "Beach Blanket Babilọn," na "BratPack," ahụmịhe ihe nkiri dị ndụ na-eme ememme ihe nkiri '80s gosipụtara. Feinstein nọ na Nikko.